Alao ny Review sy ny Google Review avy amin'ny Apps ampiasain'ny mpanjifanao! | Martech Zone
Alao ny Review sy ny Google Review avy amin'ny Apps ampiasain'ny mpanjifanao!
Alatsinainy 29 Febroary 2016 Alahady 28 Febroary 2016 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay dia nanao tafatafa mahafinaritra niaraka tamin'i Daniel Lemin, mpanoratra ny ManipuRATED: Ahoana ny fomba ahafahan'ny tompona orinasa miady amin'ny laharana an-tserasera sy fanombatombanana hosoka. Niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fisamborana hevitra izy mba hananana hevitra vaovao sy hiadiana amin'ny hevitra ratsy mety hipoitra indraindray.
Misy fotoana tsara kokoa ahazoana famerenana tsara ve fa tsy aorian'ny fialan'ny mpanjifa afa-po amin'ny orinasanao? Mety tsy izany - koa maninona raha apetraho ny dingana iray izay mitarika famerenana bebe kokoa ary mora atao izany. Famerenana izany mandefa rohy amin'ny alàlan'ny SMS amin'ny mpiaro anao. Rehefa manokatra ny pejy fitobiana vokatr'izany ilay mpiaro dia mamokatra rohy zanatany ho an'ny fampiharana finday Yelp na Google Mobile Application amin'ny finday avo lenta ilay pejy.
Satria efa tafiditra ao ny rindranasa, io dia mampihena ny isan'ny dingana takiana mba hamindrana ny mpanjifa amin'ny fifaliana… ho voarakitra an-tsoratra! Ny fakana ny famerenana tsara rehetra dia misy fiatraikany amin'ny orinasanao, koa maninona raha alaina izany isaky ny mandeha? Matetika izy io dia manararaotra ny algorithman famerenana - izay manasongadina ny fahitan'ny tsikera fa tsy ny habetsany ihany.
Fanamarihana izay tafiditra ao anatin'izany
Teknolojia finday mampifandray lalina
Fampidirana ny YELP anao! ary kaonty Google
Ny fanangonana ireo hevitra rehetra nataonao tamina pejin-tranonkala iray ho an'ny fizarana fanampiny
Rafitra fanaraha-maso mailaka manaraka
Fametrahana tanjona sy fiofanana ekipa maharitra
Kitapo fanombohana vita pirinty
Tags: tsikera mobile googlegoogle ny orinasakogoogle hevitrahevitra momba ny findayavereno jerena izaySMSsms hevitralahatsoratrafandefasana hafatra an-tsoratraYelphevitra yelp
Dingana 8 mankany amin'ny paikady marketing mahomby amin'ny kaonty mahomby